Resaky ny mpitsimpona akotry : sao ianao mihevitra | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : sao ianao mihevitra
Repoblika anie ny fifehezana mikasika ny fanjakana eto amin’ny Nosy, izany hoe ny toerana fanapahan-kevitra sy fitantanana rehetra dia ifandimbiasana, tsy misy na iray aza natao aharitra ho an’olon-tokana. Mandalo ny fiandraiketana fahefana ambony. Tsy mampihena na kely aza izany ny fahambonin’ny adidy iantsorohan’izay mitoetra eo
amin’ilay toerana misy azy, ary tsy mampihetry ny haja sy voninahitra mendrika ho an’izay eo. Adidin’ny olom-pirenena rehetra noho izany no mampiseho sy maneho fanajana ho an’izay tompon-toerana mandalo manatanteraka adidy, izay no tanjaky ny Repoblika, antoky ny fahefany sy ny fahatezany. Na miserana araky ny fotoana voafetra aza dia fahefana feno toy izay voasoratra ny eo am-pelatanan’ ireny olona ireny.
Etsy andanin’izany koa anefa tokony tsy ho adinoin’ny mpitondra napetraka eo amin’ireny toeram-pahefana ireny fa avy amin’ny vahoaka ny fahefany ka tsy izy indray no hanana fijery miavona ka hihevitra hanambonimbony tena raha mitingintingina eny an-toerana avo. Ny fanajana azy ireny dia noho ny toeram-piandrianana misy azy, rehefa eo izy dia tsy misy afaka hitsara ny famendrehana na tsia, izy aloha no eo, izy sy ireo ny an’ny tena. Raha tsy omena ny tandrify azy ny mpitondra mahefa dia ny rafitry ny fitantanam-panjakana no voahitsakitsaka ary ny Repoblika sy ny Firenena no very hasina, lasa valalan’amboa ka na ny tompony aza tsy tia. Matetika koa anefa no mitranga dia ireo nametrahana hafatra indray no mamalan-kira, amina fanadinoana fa ny toerana misy azy no ambony ka izy indray no lasa manambonimbony tena tsy ampy fanetren-tena fa vontom-piavonana sy fianjonanjonana. Tsy mitaky fihatsarambelatsihy akory izany fanetren-tena izany ka hanery azy ireo hitsikitsiky fahantany amin’izao olon-drehetra mifanena aminy izao, olon-dehibe anie ny maro mahay manavaka ny fomba feno havonavona sy ny fihetsika mangina mitory fanajana.
Any an-tsefatsefan’ny fiarahamonina any maro ny olona manana ny fomba fitazanany ireo olona ambony: ao ireo malaza ho mpiantsara ivelatsihy noho ny fitsikitsikiny tsy maharesy lahatra fa tena avy amin’ny fo, andany koa anefa eo ireo mibaribary eny an-tavany ny fivontosan’ny atidoha keliny amin’ny fiheverana fa izy no tena izy. Raha mba fantatrareo ry zalahy, fa tsy voafitaky ny fidehadehafana ny vahoaka, maro ny mpijery manao solomaso mampiboridana izay tazanina.